संसारको सृष्टि ईश्वरले गरेका होइनन्, गौतम बुद्धका ८ तर्क – Sapana Sanjal
June 10, 2021 155
Sapana Sanjal : संसारको सृष्टि कसले गर्‍यो ? यो एकदम साधारण प्रश्न हो। ईश्वरले संसारको सृष्टि गरे भन्ने उत्तर पनि उत्तिकै साधारण हुनआउँछ।
भारद्वाजले भने, ‘तरुक्खले निर्देश गरेको मार्ग नै मोक्षको सरल मार्ग हो । यसको नियम पालना गर्ने मानिस यही मार्ग भएर नै ब्रह्मसम्म पुग्छ र ब्रह्मसँग उसको मिलन हुन्छ ।’
बुद्धले भन्नुभयो, ‘हे वासेट्ठ, अब मलाई भन, यदि कसैले त्यो पुरूषलाई सोध्यो, ‘तिमीले यति प्रेम गर्न संसारकी सबैभन्दा सुन्दर युवती को हुन्रु के उनी राजन्य कन्या हुन् कि ब्राम्हण कन्या हुन्, उनी वैश्य हुन् वा सुद्र?’ अब उसले के जवाफ दिन्छ?’
उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि ईश्वरसँग न्याय र दया भइदिएको भए संसारमा यति धेरै अन्याय किन हुन्थ्यो ? संसारमा यति धेरै समस्या देख्दादेख्दै, ती सर्जकले, ब्रह्मले किन यो सबै समाधान गर्दैनन्रु यदि उनीसँग त्यतिधेरै शक्ति छ र त्यसलाई रोक्ने सामर्थ्य कसैको छैन भने यो समस्याबाट छुटकारा दिलाउन उनको हात किन उठ्दैन? उनले नै सृष्टि गरेका प्राणीहरू दुःख भोग्न किन अभिशप्त छन्रु किन उनी सबैलाई खुशीको बर्दान दिँदैनन्रु संसारमा किन छल, झुट, अज्ञानता व्याप्त छरु यहाँ सत्य र न्याय किन अप्राप्य छ? तिमीहरूको ब्रह्मलाई मेरो चुनौति छ, उनी सबैभन्दा अन्यायी हुन् जसले यो संसारलाई असत्यको घर बनाए । हरेक प्राणीको भागमा सुख वा शोक, असल कर्म वा खराब कर्म के पर्ने भनेर निर्धारण गर्ने शक्ति भएका सर्वशक्तिमान ईश्वर कतै छन् भने उनीमाथि पापको धब्बा लागेको हुनुपर्छ। कि त मानिस ईश्वरको ईच्छाबाट सञ्चालित नै छैन, कि त ईश्वरसँग सत्य र न्याय छैन।’
बुद्धको त्यो तर्क पतित-समुत्पादको सिद्धान्तमा थियो, जसको अर्थ परनिर्भर उत्पति हो। यो सिद्धान्त अनुसार ईश्वरको अस्तित्व छ कि छैन भन्ने प्रश्न प्रमुख प्रश्न होइन, न त ईश्वरले ब्रह्माण्डको सृष्टि गरेका हुन् कि होइनन् भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो । वास्तविक प्रश्न त सृष्टिकर्ताले कसरी संसारको रचना गरे भन्ने हो । ईश्वरमाथिको विश्वासको विषय यही प्रश्नको उत्तरमा निर्भर हुन्छ । यससँगै जोडिएर आउने महत्वपूर्ण प्रश्न छ, ईश्वरले पहिले भएकै (कुनै तत्व वा केही) बाट संसारको सृष्टि गरे वा शुन्यबाट संसारको सृष्टि गरेरु एकातिर शुन्यबाट संसारको सृष्टि सम्भव हुँदैन। अर्कातिर उनले पहिले भएकै केहीबाट संसारको सृष्टि गरे भने त्यो नयाँ सृष्टि नै भएन। त्यो त पहिल्यैदेखि थियो, जो ईश्वरले सृष्टि गरेको होइन, उनी सृष्टिकर्ता होइनन्। यदि ईश्वरले पहिलेदेखि कै अस्तित्वलाई प्रयोग गरेर यो संसारको सृष्टि गरे भने उनी सृष्टिकर्ता हुनसक्दैनन्।
Prevबौद्ध साहित्यको आधारमा बुद्ध र नागराजाको सम्बन्ध
Nextआज नेपालमा नयाँ अपडेट यस्तो : ‘दोबर सङ्ख्यामा चिकित्सकको मृत्यु’